Wararka Maanta: Sabti, Mar 31, 2018-Jawaari : Anniga iyo Labadeyda ku-xigeen waan ka Aqbalnay madaxwyenaha in xaalada la dajiyo
Guddoomiyaha oo goor dhaw warbaahinta la hadlay sheegay in kulanka maanta loo hakiyay codsi ka yimid Madaxweynaha oo xalay saqdii dhexe illaa waabarigii kulan la qaatay Guddoonka Golaha Shacabka.
Guddoomiye Jawaari ayaa sheegay inay ogolaadeen wixii khilaaf ee jira xal laga gaaro, isla markaana loo turo shacabka, isla markaana midnimada iyo wadajirka Baarlamaanka lagu dadaalo.
“Aniga iyo labadeyda kuxigeen waxaan la kulanay Madaxweyne Faramajo, wuxuu soo jeediyay in kulanka maanta la hakiyo, si xaalada loo dejiyo, anagana waa ka wada aqbalnay soo jeedinta Madaxweynaha”ayuu yiri Guddoomiye Jawaari.
Wuxuu intaa ku daray in dib laga soo sheegi doono, wixii kale ee dhiman, si loo helo xasilooni siyaaasadeed sida uu yiri.
Waxaa uu ugu baaqay Xildhibaanada inay aqbalaan soo jeedinta madaxweynaha, lana ilaaliyo bedqabka iyo wadajirka Baarlamaanka sida uu yiri.
Kulankii Baarlamaanka ee maanta loo balansanaa ayaa Xildhibaanada iska soo horjeeda kala wateen labo ajande ah, waxaana laga cabsi qabay fowdo iyo qalalaase siyaasadeed oo hareeya dalka
3/31/2018 10:28 AM EST
Sabti, Maarso, 31,2018(HOL)–Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa madaxda Soomaaliya ku eedeeyey inay farogalin ku hayaan arrimaha Somaliland,isla markaana khalad iyo daandaansi ku tilmaamay dacwadda ay Soomaaliya u gudbisay UN-ta.